प्रतियोगिताको विरोध गर्ने एमाले नेताकै छोरी श्रृङ्खला भइन् नेपाल शुन्दरी
नेपाल पाना प्रकाशित: २०७४-१२-२९ गते | 2996 पटक हेरिएको
काठमाडौं । श्रृङ्खला खतिवडा यस वर्षको ‘मिस नेपाल २०१८’ बनेकी छन् । अन्तिम प्रतिस्पर्धामा उनले २४ जनालाई उछिन्दै मिस नेपालको ताज भिरेकी हुन् । श्रङ्खलालाई अघिल्लो वर्षकी मिस नेपाल निकिता चण्डकले क्राउन पहिर्याएकी थिइन् ।उपाधिसँगै श्रृङ्लाले ‘मिस वल्र्ड’मा प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन् । खतिवडा एमाले नेता विरोध खतिवडाकी छोरी हुन् । विरोधले केही वर्षअघि नेपाल शुन्दरी प्रतियोगिताको विरोध गर्दै आएका थिए ।
बुधबार अबेर सम्पन्न प्रतियोगितामा मनिता देवकोटा ‘मिस नेपाल यूनिभर्स’ भइन् । उनी ‘मिस यूनिभर्स’मा सहभागी हुनेछिन् । ‘मिस नेपाल अर्थ’ विजेता प्रिया सिग्देलले बनिन् । उनी नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै ‘मिस अर्थ’मा सहभागी हुनेछिन् ।
यस वर्षको ‘मिस नेपाल इन्टरनेशनल’को उपाधि रोनाली अमात्यले हात पारेकी छन् । रोनाली ‘मिस इन्टरनेशनल’मा सहभागी हुनेछिन् । प्रतियोगिताको मुख्य निर्णायक गोविन्द गजुरेल थिए । प्रतियोगिता द हिडेन ट्रेजरले आयोजना गरेको हो ।
अभिनेता नाना पाटेकरले यस्ताे गरेपछि यी नायिकाले मचाइन् सुटिङ सेटमै हल्ला!
काठमाडौं । अभिनेता नाना पाटेकारमाथि बलिउड सुपरहिट नायिका तनुश्री दत्ताले यौन दुर्व्यवहारकाे गरेकाे आरोप लगाएकी छिन् । तनुश्री दत्ताकाे यस्ताे अाराेपले बलिउड क्षेत्रनै तरङ्गित..
'द भ्वाइस अफ नेपाल'का कोचलाई प्रश्नः सधै ड्रेस एउटै किन, सरकार उनीहरुलाई संसारकै गरिब घोषणा गरियोस् !
काठमाडाैं । नेपालमा चलिरहेको चर्चित गायन रियालिटी शो 'द भ्वाइस'का कोचहरुले लगाएको ड्रेसबारे खिल्ली उडाइएको छ । ट्विटरमा एक जना व्यक्तिले ट्विट गर्दै कोचहरुले..
सलमान खानको 'दबंग द टुर नेपाल' कार्यक्रम आेडिसिलाई बन्यो टाउको दुखाइको विषय, आउलान त खान ?
काठमाडाैं । नेपालमा बलिउड अभिनेता सलमान खानलाई धमकेदार प्रस्तुति दिने भन्दै आयोजना गरिएको कार्यक्रम 'दबंग द टुर नेपाल' फेरि सरेको छ । यसअघि पनि दुई पटक&nb..
नेपाल आईडलको क्रेजलाई धक्दा दिने गायन रियालिटी शो 'द भ्वास अफ नेपाल' युट्युबको ट्रेन्डिङ वानमा (भिडियोसहित)
काठमाडाैं । नेपालमा विभिन्न गायन रियालिटी शो हरु संचालन भए जसमध्ये कुनैले ख्याति कमाय भने कुनै विवादित बनेर कानुनी दायरामा सम्म परे । यस्तै पछिल्लो समय भित्रिएको &#39..